छाउगोठ « Janata Samachar
काठमाडौं । दैलेख र सुर्खेत महिनावारी भएपछि आफन्तले घरभित्र बस्न दिएनन्। देउता रिसाउने र अनर्थ हुने भन्दै उनलाई घरदेखि टाढा रहेको गोठमा राखियो। दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनीस्थित लैनचौरकी १९ वर्षिया तुलसी शाहीको
छाउगोठ : प्रशासन भत्काउँछ स्थानीय बनाइहाल्छन्
काठमाडौं । राजधानीबाट शुक्रबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाले बुधबारबाट राजधानीमा शुरु भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको बैठकबारे प्रमुख समाचार बनाएका छन् । त्यस्तै पत्रिकाहरुले कोरोना भाइरस संक्रमण
निकै धेरै राम्रा विषयहरूकाे समिश्रण रहेको अछामलाई बहुसंख्यक मानिसले छाउपडी कुप्रथा रहेको जिल्लाका रुपमा चिन्दै आएका छन् । त्यो केवल अछामका लागि मात्रै भन्दा पनि सिंगो सुदूरपश्चिमकै दुर्भाग्यको विषय हो
छाउगोठ धमाधम भत्काइँदै
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोमबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको अभियानको पहिलो दिन ११ वटा छाउगोठ भत्काइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले
छाउगोठमा मृत अवस्थामा भेटिइन् युवती
अछाम । साँफेबगर नगरपालिकामा एक महिनावारी भएकी युवती छाउपडी गोठमा मृत अवस्थामा भेटिएकी छन् । महिनावारी भएको ४ दिनमा नगरपालिका – ३ सिद्धेश्वर डिक्रेनिकी २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावत छाउ
देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरा मुकाममै छाउगोठ !
पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराको सदुरमुकाममै छाउ गोठ भटिएको छ ।
दुई सय गोठ भत्काइयो, छाउपडी कायमै
२ सय भन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएको छ । तर पनि छाउपडी प्रचलन भने पूर्ण रुपमा हट्न सकेको छैन ।
टीकापुर नगरपालिकाले कहिले भत्काउँछ छाउगोठ ?
टीकापुर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा छाउगोठ अझै कायम छन् । नगरपालिकाको यतातिर ध्यान नजाँदा बढिरहेको गर्मीमा छाउपडी बार्नेहरुलाई विभिन्न जीवको डर हुने गर्दछ । मुख्यतयाः तराईमा सर्पको खतरा हुन्छ । तस्बिरः